Maticha ngaagare tatata – Mathema | Kwayedza
Maticha ngaagare tatata – Mathema
29 Nov, 2019 - 00:11	 2019-11-28T20:48:31+00:00 2019-11-29T00:03:16+00:00 0 Views
Nqobile Tshili ari kuBULAWAYO
ZVICHEMO zvematicha zvavari kusangana nazvo mubasa ravo zvinofanirwa kugadziriswa nechinangwa chekuti vashande nemazvo, gurukota redzidzo yepuraimari nesekondari, Ambassador Cain Mathema vanodaro.
Ambassador Mathema vakataura mashoko aya pamusangano wekukurukura zvirongwa zvebazi ravo zvegore rinouya uyo wakaitirwa kuBulawayo nemusi weMuvhuro svondo rino.
Vanoti varairidzi vari kugara mudzimba dzisina kukodzera uye mamiriro ezvinhu aya anofanira kusanduka nekukasika.
“Bazi rino, ndinoziviswa kuti rine varairidzi 130 000. Ava ndivo mauto angu semaziviro andinoita, ndivo masoja angu. Hangingatambire mamiriro ezvinhu ekuti mauto angu anogara akamanikidzana, maticha 10 muimba imwe chete.
“Ticha mumwe nemumwe anofanira kugara mumba yake. Hatingave nemamiriro ezvinhu ekuti maticha haakwanisi kugara akasununguka.
“Chikoro chisati chavakwa, tinofanira kuona kuti pava nemvura yemupombi uye chechipiri pachikoro chitsva pavakwa imba yemukuru wechikoro, tozovaka dzematicha nedzimba dzekudzidzira,” vanodaro Ambassador Mathema.
Vanoti kana pasina zvinoita kuti maticha ave nechidokwa-dokwa chekuita basa ravo, Hurumende inokundikana kuve nedzidzo yemhando yepamusoro-soro.
“Zvinonyadzisa kuona maticha achinochera mvura kurwizi Gwayi vakatakura migomo pamusoro munguva dzemangwanani vasati vaenda kuchikoro uye totarisira kuti vaite basa ravo nemazvo pakadaro?”
Ambassador Mathema vanoti maticha anofanirwa kubatsirwa kuti vavake dzimba dzavo nekutenga mimwe midziyo kuburikidza nezvikwereti muzvirongwa zvakaita sePublic Private Parterships (PPP).
Vanoti pane zvikoro zvine chitsama zvakaparadzwa nemvura yaive nedutu uye hurukuro dziri pakati kuitwa kuti pawanikwe mari yekuti zvivakurudzwe.
Ambassador Mathema vanoti vachaita hurukuro nePublic Service Commission (PSC) dzekuti papinzwe vanhu mabasa munzvimbo dzose dzine vakafanobata zvigaro muzvikoro nechinangwa chekuti basa riendeke.
“Ndichanyora tsamba kuna sachigaro (wePSC) kuitira kuti vanhu vapinzwe basa munzvimbo idzi,” vanodaro.
Vana vodzidza vakaguta14 Feb, 2020
‘Tinoda kudzidziswa bumbiro remutemo�...14 Feb, 2020
Kuda anokuvara muhondo14 Feb, 2020